တစ်ဦးကမော်လ်တာပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကနှစ်ပေါင်းရာချီများအတွက်န်းကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကျောရှေးခေတ်ဂရိနဲ့ရောမမြို့မှ၎င်း၏မူရင်း tracing, မော်လ်တာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ချမ်းသာကြွယ်မိသားစုများအတွက်ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်၏ဖန်တီးမှုအဘို့အခွင့်ပြုခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ဥပဒေရေးရာအစဉ်အလာကိုချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
2007 ခုနှစ်တွင်မော်လ်တာသည်၎င်း၏အရပ်ဘက်ကုဒ်ပြင်ဆင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်များ၏ဖန်တီးမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 2007 ကတည်းကမောလ်ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုတစ်ဦးယုံကြည်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူသီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကတက်ကြွစွာစီးပွားဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲအတော်ကြာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်တက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍယူပြီးမပေးနေချိန်မှာလောလောဆယ်အမြစ်လည်းအိမ်ခြံမြေ, ရေယာဉ်များ, ဉာဏဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကော်ပိုရိတ်ရှယ်ယာများကဲ့သို့စီးပွားဖြစ်ဂုဏ်သတ္တိများပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တစ်ဦးမော်လ်တာပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ် passive စီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်စားသုံးလို့ရပါတယ်။
အတော်များများကနိုင်ငံခြားသားများ့မှုသည်ကုမ္ပဏီများမှကိုင်ပြီးများအတွက်မော်လ်တာအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုအသုံးပြုပါ။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကအချို့သည်တက်ကြွစွာအခြေခံအုတ်မြစ်ကပိုင်ဆိုင်ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာနှင့်အတူကုန်သွယ်ရာတွင်ပါဝင်နေနိုင်ပါသည်။ ရိုးအမြစ်ကိုပိုင်ဆိုင်သောပုဂ္ဂလိကကန့်သတ်သည့်ကုမ္ပဏီများတက်ကြွကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီများ passive ပိုင်ဆိုင်မှုဤအမြိုးအစားများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးယာဉ်များဖြစ်ကြသည်။
• နိုင်ငံခြားရေးထိန်းချုပ်ရေးဖြည့်စွက်: နိုင်ငံခြားသားတွေနိုင်ငံခြားအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ရိုးအမြစ်ကိုဖန်တီးနဲ့နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။
• 0% အခွန်ကောက်ခံမှု: ရိုးအမြစ်ကိုကိုး စား. တူသောကုသခံရဖို့ရှေးခယျြနှင့်မျှမအခွန်အခများပေးဆောင်နိုင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကုမ္ပဏီနှင့်တူကုသနဲ့သာပြန်အမ်းပြီးနောက် 5% ပေးဆောင်ရလိမ့်မည်။ မှတ်ချက်: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနှင့်အခြားသူများကိုသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: တည်ထောင်သူရဲ့နာမကိုအမှီနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ '' အမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
• လျှို့ဝှက်: အဆိုပါဥပဒေအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အပိုလျှို့ဝှက်ချက်များပေးပါသည်။
• cell ဖောင်ဒေးရှင်း: တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်သည်အခြားဆဲလ် liabilities မှသူတို့ကိုခွဲခြားနိုင်ရန်အတွက်တိကျသောပိုင်ဆိုင်မှု, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, ဒါမှမဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်သီးခြားဆဲလ်တွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
• အင်္ဂလိပ်: မော်လ်တာရဲ့ဒုတိယအရာရှိတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးအမြစ်ကို၎င်း၏အမည်ကိုအတွက်စကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" ပါဝင်ရမည်။
မောလ်ရိုးအမြစ်ကိုဖြစ်စေတိကျသောရည်ရွယ်ချက်များသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအမြစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရိုးအမြစ်ကိုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိခြင်းနှင့်များသောအားဖြင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များပေးခြင်းမရှိဘဲဖန်တီးနေကြသည်။ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆင့်အတန်းနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားပရဟိတလုပ်ငန်းပုံမှန်ရည်ရွယ်ချက်ရိုးအမြစ်ကိုဖြစ်ကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့ကအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများမှအကျိုးခံစားခွင့်များကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်အခွန်အကြိုးကြေးဇူးမြား၏အားသာချက်ကိုယူပြီးနေချိန်မှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ရာပူဇော်သက္ကာဘာလို့လဲဆိုတော့အများစုကနိုင်ငံခြားသားတွေပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုဖန်တီးပါ။
ရိုးအမြစ်ကိုသီးခြားဥပဒေရေးရာသူတို့ရဲ့တည်ထောင်သူအနေဖြင့်သီးခြားဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အတူအဖွဲ့အစည်းများ, ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ, ကာကွယ်, နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ ရုံက၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများနှင့် ဆက်စပ်. တစ်ကော်ပိုရေးရှင်းကြိုက်တယ်။ ဒါဟာသူတို့ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမည်, ပွင့်လင်းအရစ်ကျနဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာဂုဏ်သတ္တိများပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုနှင့်တရားစွဲမှု file နိုင်တော့မည်နှင့်ဥပဒေတစ်ခုတရားရုံးတွင်တရားစွဲခံရမည်။ တစ်ခုပါဝင်ပတ်သက်ပါတီများ၏ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောမဟုတ်သလိုသေခြင်းတရားမအုတ်မြစ်များ၏ဥပဒေရေးရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အဆင့်အတန်းကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။
မော်လ်တာနဲ့အခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများထက်အမြစ်ပိုမိုလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် privacy ပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ, ပင်တရားစွဲဆိုမှုများကဲ့သို့တရားစွဲဆိုနေစဉ်အတွင်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာလျှို့ဝှက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ပိတ်ထားသောတရားရုံး၏ကြားနာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကာကွယ်ရန်ကျင်းပကြသည်။
အတော်များများကမူလအမြစ်ကိုအစိုးရနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ပါဘူး။ တချို့ကသူသို့မဟုတ်သူမ၏တစ်ဦးယုံကြည်မှု cresting များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုထောက်ပံ့ပေးမည့်တည်ထောင်သူရဲ့သေခြင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြသည်။ သည်အခြားသာဓကမှာတော့အများပြည်သူလုပ်ရပ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးစားဖော်ထုတ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
ရိုးအမြစ်ကိုအစိုးရနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားကြသောအခါ, သူတို့ကုမ္ပဏီများနှင့်ကိုး စား. များအတွက်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးထက်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အာဏာအရာ (အစားကုမ္ပဏီများသည်ထက်) ဥပဒေရေးရာ Persons များအတွက်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်။ ပုဂ္ဂလိကအမြစ်လည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အထူးလိုင်စင်ရှိသည်။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြစ်ကြသည်: အဖွဲ့စည်းရန်ကငျြ့ (ကယုံကြည်ကိုးစားပါကငျြ့သို့မဟုတ်တစ်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့စာချွန်လွှာနှင့်အသင်းဆောင်းပါးများနှင့်တူ) ။ အဆိုပါလုပ်ရပ်အခြေခံအုတ်မြစ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာထုံးစံနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ပါတီများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအားထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။
အနည်းဆုံး 1,200 ယူရိုယင်း၏တန်ဖိုးကိုတည်ထောင်ရန်ဒေသခံတစ်ဦးစာရင်းစစ်လိုအပ်ငွေသားသို့မဟုတ်တူ၏ကြင်နာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်သည့်ကနဦးပဒေသာပင်များလည်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူတို့ကဖော်ပြခဲ့သည်ခံရဖို့ရှိသည်ထက်အခြားအကြာတွင်ပဒေသာပင်များလည်း၏ပမာဏအပေါ်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ ပဒေသာပင်များလည်းသူတို့မူလအလှူရှင်ပြန်လွှဲပြောင်းမရနိုငျဘယ်သို့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြစ်ကြသည်။
Protected ဆဲလ် Foundations
ပညတ္တိကျမ်းတစ်ဦးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဆဲလ်ကုမ္ပဏီနဲ့တူသီးခြား, အသားအရောင်ခွဲခြားဆဲလ်နေသော protected ဆဲလ်ရိုးအမြစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ဆဲလ်တွေပိုင်ဆိုင်မှု, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုခွဲခြားရန်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်ပညတ်တရား၏တစ်ဦးတရားရုံးတွင်တရားစွဲစေခြင်းငှါအရာတစျခုအခြေခံအုတ်မြစ်ဆဲလ်ကနေအခြားဆဲလ်များကိုကာကွယ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေ segregated နေကြသည်။
• Foundation ၏အမည်ကား,
• Foundation ၏မော်လ်တာလိပ်စာ;
• Foundation ၏ရည်ရွယ်ချက်,
•အသက်တမ်း၏ Duration: (မသတ်မှတ်ရသေးပါလျှင် 100 နှစ်ပေါင်း);
တစ်ဦးယုံကြည်မှုတစ်ခု settlor ဆင်တူသည်ကိုတည်ထောင်သူတစ်ဦးပဒေသာပင်များလည်းအဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှငွေသားသို့မဟုတ်ဂုဏ်သတ္တိများလှူဒါန်း။
တစ်ဦးယုံကြည်မှုအတွက် settlors မတူဘဲအခြေခံအုတ်မြစ်တည်ထောင်သူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, ထိုကောင်စီနှင့် / သို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများမှတဆင့်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ထိန်းချုပ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ တည်ထောင်သူတစ်ဦးတည်းသောစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုမဖွစျနိုငျတဲ့သူတစ်ဦးတည်းသောအကျိုးခံစားခွင့်အခါတစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်သည်။
တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်း၏ဒါရိုက်တာဆင်တူ, အခြေခံအုတ်မြစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့လုပ်ရပ်အတွက်စည်းကမ်းချက်များအညီအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲ။ အဆိုပါလုပ်ရပ်သူတို့ခန့်အပ်ဖယ်ရှား, လျော်ကြေးငွေ, သူတို့သည်ယျအင်အားကြီးဘယ်လိုထွက်သတ်မှတ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည်ဒေသခံဖြစ်သို့မဟုတ်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နှင့်သဘာပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအပေါငျးတို့သအပြင်ဘက်မော်လ်တာ၏နေထိုင်ပါလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ပြီးတော့အနည်းဆုံးဒေသခံတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းန်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ်လိုင်စင်ရသူသည်ခနျ့အပျထားရမည်ဖြစ်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများများအတွက်အရေးအပါဆုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်လုပ်ရပ်အတွက်ထွက် set သည်နှင့်အညီအခြေခံအုတ်မြစ်ကနေနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ထုံးစံ၌အကျိုးပြုသူကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်ရပ်တခုကာကွယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ပါလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်တည်စေ။ ယင်းလုပ်ရပ်၏စည်းကမ်းချက်များအရ, ကာကွယ်အားလုံးအရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် / သို့မဟုတ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးကောင်စီတို့ကတိုင်ပင်ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။ အဆိုပါလုပ်ရပ်အတွက်ကာကွယ်ပိုမိုအင်အားကြီးပေးနိုငျသညျ။
ယင်းလုပ်ရပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အဖြစ်ယုံကြည်မှုအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်ဆင်တူ, သူတို့ကအခြေခံအုတ်မြစ်ကနေအခြို့သောအကြိုးကြေးဇူးမြားရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ သူတို့ကသဘာဝအပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်အခြားအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ယင်းလုပ်ရပ်အထူးသချန်လှပ်မဟုတ်လျှင်, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့မှတ်တမ်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ရှိသည်။
အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်များအခွင့်အရေးများအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ '' အကြွေးသို့မဟုတ်အမွေခံတို့ကအတူဝငျရောကျစှကျရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်သည် function ကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်အတူမရှိမဖြစ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်စုသည်စဉ်းစားမရပေမယ့်, ထို option ကိုတစ်ဦးကြီးကြပ်ရေးကောင်စီခန့်အပ်ရန်ရှိနေသည်။ လိုအပ်မှုအလုပ်များအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအပေါ်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်ပေါ်ထွန်းစေနိုင်သည်။
တည်ထောင်သူ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, ကာကွယ်, သို့မဟုတ်တတိယပါတီကောင်စီမှခန့်အပ်ထားသောနိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်နိုင်သည်။
မောလ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူကိုပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်သည် non-နေထိုင်သူဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများဝင်ငွေဝင်ငွေသို့မဟုတ်မော်လ်တာအတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုင်ဆောင်မဆင်တူသည်။ ဤရွေ့ကားအဖွဲ့အစည်းများအဆင်သင့်အခွန်ကုသမှုရှိသည်။
ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုဖြစ်စေမယ့်ယုံကြည်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအဖြစ်အခွန်အခများဖြစ်ကထို option ရှိသည်။ အဆိုပါကွဲပြားခြားနားမှုကိုအောက်တွင်သရုပ်ပြကြသည်:
•တစ်ဦးကုမ္ပဏီအဖြစ်ကုသ - 35% ၏မောလ်ကော်ပိုရိတ်အခွန်က 85% ၏ပိုက်ကွန်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုအတူပုံဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပေါ် မူတည်. တစ်ဦး 5% ပြန်အမ်းငွေကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
•တစ်ဦး Trust မှအဖြစ်ကုသ - မော်လ်တာကိုး စား. သူတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအပေါ်အခွန်ကောက်ကြသည်နှင့်သူတို့ Non-နေထိုင်သူများဖြစ်ကြပါလျှင်၎င်းတို့၏ဝင်ငွေအခွန် 0% ဖြစ်ပါတယ်။ Non-နေထိုင်သူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိခြင်းအပြင်ယုံကြည်မှုကိုရဲ့ဝင်ငွေအားလုံးအခွန်အခမဲ့ဝင်ငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့အပြင်ဘက်မော်လ်တာ၏ရရှိရပါမည်။ အဆိုပါဖြတ်သန်းခြင်းဝင်ငွေအခွန်မော်လ်တာအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်သူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများထံသို့တိုက်ရိုက်ယုံကြည်မှုကိုကို bypass လုပ်။ အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးယုံကြည်မှုအဖြစ်ကုသခံရဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်သို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြေငြာအရေးအသား၌ဖြစ်နှင့်အခွန်အာဏာပိုင်များနှင့်အတူတင်သွင်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲဘယ်တော့မှစခွေငျးငှါရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကမော်လ်တာပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းက, ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်: စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်ငံခြားသားများအသုံးပြုပုံ privacy ကို, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ '' လျှို့ဝှက်သီးခြားဆဲလ်တွေမပါအခွန်အခများကိုပြည့်စုံစေနိုင်သည်, ဖန်တီးနိုင်ပြီး, အင်္ဂလိပ်မော်လ်တာအတွက်ဒုတိယရုံးသုံးဘာသာစကားသည်။